Hetsika ady amin’ny jamala: rongony efa ho 3 t saron’ny zandary | NewsMada
Hetsika ady amin’ny jamala: rongony efa ho 3 t saron’ny zandary
Nanao ranolava ny fahatrarana rongony tao Ambanja. Mitotaly 2 888kg be izao ny tratran’ny zandary tany an-toerana. Efa ho 3 taonina ny sarona, ahitana rongony efa maina, voan-drongony, tao koa ny mbola lena.
Tao anatin’ny roa andro monja, saron’ny zandary tao Ambanja ny rongony mitotaly 2888kg. Isan’izany koa ny voan-drongony maina milanja 77kg. Vokatra azon’ny zandary nandritra ny hetsika ady amin’ny jamala, ny 10 ka hatramin’ny 12 oktobra lasa teo. Niarahan’ny zandary avy ao Antsiranana sy ny zandary avy ao amin’ny kaompania ao Ambanja izany.
Raha ny tatitra azo tamin’ny zandarimariam-pirenena, tratra tao Antetezampaka Marotolana ny rongony lena 650Kg. Voan-drongony milanja 31kg kosa sarona tao anaty trano afovoan’ny saha 25ha. Tsy nijanona hatreo ny fitsirihana nataon’ny zandary. Vokany, sarona tao Antsahafaly Tanambao Antsahabe ny rongony raviny 1T500. Ao koa ireo voan-drongony maina milanja 46 kg, tao anaty saha 35ha.
Mbola nisy koa ireo rongony maina tra-tehaka tamin’ny fisavana ny tranona mpamongady iray atao hoe Ralia Sekory, 738kg tao anaty gony miisa 44 izany. Izay tratra tao Anivorano Mahadera Marotaolana. « Ireo rongony sy voany teny antsaha dia nongotana sy nopotehina teny ifotony ihany », hoy hatrany ny fanazavan’ny zandarimariam-pirenena, loharanom-baovao. Mitohy hatrany ny hetsika, hoy ny Jly Behivoka Fiederch, kaomandin’ny Fari-piadidin’ny zandarimariam-pirenena ao Antsiranana, “Tsy avela ho afa-maina ireo izay minia mamboly sy mivarotra ary manjifa jamala ao anatin’ny faritany iadidiany. Mba hiadiana amin’ny asan-jiolahy rehetra manerana ny Nosy izany”, araka ny nambarany.